Kutheni Sisenza Isidlo Sangokuhlwa SeNkosi? | Funda
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISidama ISilozi ISpanish Intetho Yezandla YaseMerika Intetho Yezandla yaseArgentina Intetho Yezandla yaseBrazil Intetho Yezandla yaseColombia Intetho Yezandla yaseItali Intetho Yezandla yaseJapan Intetho Yezandla yaseMexico Intetho Yezandla yaseRashiya Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Isoko Isi-Itali IsiAcholi IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBengali IsiBhulu IsiBicol IsiBislama IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitonga (SaseMalawi) IsiChitumbuka IsiChiyao IsiChokwe IsiChuvash IsiCibemba IsiCinyanja IsiCreole saseHaiti IsiCreole saseMauritius IsiCreole saseSeychelles IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiDrehu IsiEfik IsiEstonia IsiFiji IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiGuarani IsiGujarati IsiGun IsiHausa IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHindi IsiHiri Motu IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKannada IsiKazakh IsiKikamba IsiKikaonde IsiKikuyu IsiKiluba IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKiribati IsiKirundi IsiKisonge IsiKongo IsiKorea IsiKrio IsiKwangali IsiKwanyama IsiLatvia IsiLithuania IsiLuganda IsiLunda IsiLuo IsiLuvale IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMambwe-Lungu IsiMarathi IsiMaya IsiMixe IsiMongolia IsiNdebele IsiNdebele (saseZimbabwe) IsiNdonga IsiNepali IsiNgesi IsiNorway IsiNzema IsiOromo IsiOssetia IsiOtetela IsiPangasina IsiPapiamento (saseAruba) IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPunjabi IsiQuechua (saseBolivia) IsiQuechua (saseCuzco) IsiRashiya IsiRomania IsiRunyankore IsiSamoa IsiSango IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwati IsiSwedish IsiTagalog IsiTajiki IsiTamil IsiTatar IsiTelugu IsiTetun Dili IsiThai IsiTigrinya IsiTiv IsiTok Pisin IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTshiluba IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTurkmen IsiTurkmen (SesiCyrillic) IsiTuvaluan IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUrdu IsiUzbek IsiVenda IsiVietnam IsiWaray-Waray IsiWayuunaiki IsiWolaita IsiXhosa IsiYoruba IsiZande IsiZulu isi-Igbo isiWallisian isiZapotec (saseIsthmus)
“Oku kwenzeleni ukundikhumbula.”—1 KOR. 11:24.
Kutheni sifanele senze iSidlo Sangokuhlwa SeNkosi?
Iyintoni imifuziselo yeSikhumbuzo, ibe imela ntoni?
AmaKristu avakalelwa njani ngethemba lawo alinikwe nguThixo?
1, 2. Wenza ntoni uYesu ngengokuhlwa yangoNisan 14, 33 C.E.? (Jonga umfanekiso osekuqaleni.)
KUSANDUL’ ukurhatyela, kodwa inyanga epheleleyo ikhanyise kuyo yonke iYerusalem. Yingokuhlwa yangoNisan 14, 33 C.E. UYesu nabapostile bakhe bebebhiyozela iPasika, bekhumbula ukuhlangulwa kwamaSirayeli kubukhoboka baseYiputa kwiminyaka eyi-1 500 ngaphambili. Ekunye nabapostile abathembekileyo abayi-11, ngoku uYesu usungula isidlo esikhethekileyo, esiya kuba sisikhumbuzo sokufa kwakhe okuza kwenzeka kungekudala. *—Mat. 26:1, 2.
2 UYesu uyathandaza aze adlulise isonka esingenagwele kubapostile, esithi: “Thabathani, nidle.” Emva koko, uthatha indebe yewayini, aphind’ athandaze, aze athi: “Selani kuyo, nonke.” (Mat. 26:26, 27) UYesu uphelele apha kwisonka newayini, kodwa ininzi into aza kubaxelela yona abalandeli bakhe abathembekileyo kule ngokuhlwa ingasayi kuze ilibaleke.
3. Eli nqaku liza kuphendula yiphi imibuzo?
3 UYesu wasisungula ngaloo ndlela ke iSikhumbuzo sokufa kwakhe, esikwabizwa ngokuthi ‘sisidlo sangokuhlwa seNkosi.’ (1 Kor. 11:20) Abanye basenokubuza bathi: Kutheni simele sikhumbule ukufa kukaYesu? Isonka newayini zimela ntoni? Sinokusilungiselela njani iSikhumbuzo? Ngubani ofanele athabathe? Ibe amaKristu abonisa njani ukuba ayalixabisa ithemba lawo?
KUTHENI SIKHUMBULA KUFA KUKAYESU?
4. Ukufa kukaYesu kwavula indlela yantoni?
4 Ekubeni siyinzala ka-Adam, sifumene ilifa elisisono nokufa. (Roma 5:12) Akukho mntu ungafezekanga onokuhlawulela yena okanye abanye abantu kuThixo. (INdu. 49:6-9) Noko ke, ngokufa kwakhe, uYesu wakhupha eyona ntlawulo yamkelekileyo—umzimba wakhe ofezekileyo negazi lakhe elaphalalayo. Ngokunika uThixo ixabiso lentlawulelo yakhe, uYesu wavula indlela yokuba sihlangulwe kwisono nasekufeni nokuba sifumane isipho sobomi obungunaphakade.—Roma 6:23; 1 Kor. 15:21, 22.
5. (a) Sazi njani ukuba uThixo noKristu bayabathanda abantu? (b) Kutheni sifanele sibekho kwisikhumbuzo sokufa kukaYesu?
5 Intlawulelo ingqina ukuba uThixo uyabathanda abantu. (Yoh. 3:16) Idini likaYesu libubungqina bokuba naye uyasithanda. Ngaphambi kokuba eze emhlabeni, ngoxa ‘wayesengumsebénzi onobuchule’ kaThixo, ‘izinto awayezithanda’ uYesu ‘zazikoonyana babantu’! (IMize. 8:30, 31) Ukuba nombulelo kuThixo nakuNyana wakhe kufanele kusenze sibekho kwisikhumbuzo sokufa kukaYesu, ngaloo ndlela sibe sithobela umyalelo othi: “Oku kwenzeleni ukundikhumbula.”—1 Kor. 11:23-25.
IMELA NTONI IMIFUZISELO?
6. Siyintoni isonka newayini yeSikhumbuzo?
6 Xa wayesungula iSikhumbuzo, uYesu zange enze ummangaliso wokutshintsha isonka newayini zibe ngumzimba negazi lakhe lokoqobo. Kunoko, wathi ngesonka: “Oku kuthetha umzimba wam.” Ngokuphathelele iwayini, wathi: “Oku kuthetha ‘igazi lam lomnqophiso,’ eliza kuphalala ngenxa yabaninzi.” (Marko 14:22-24) Kucacile ke ukuba isonka newayini zaziyimifuziselo.
7. Simela ntoni isonka esisetyenziswa eSikhumbuzweni?
7 Kweso siganeko sibaluleke kakhulu sango-33 C.E., uYesu wasebenzisa isonka esingenagwele esasishiyeke kwisidlo sePasika. (Eks. 12:8) EZibhalweni, ngamanye amaxesha igwele limela ukonakala okanye isono. (Mat. 16:6, 11, 12; Luka 12:1) Ngaloo ndlela, ukusebenzisa kukaYesu isonka esingenagwele kwakuyinto ebalulekileyo kuba sasiwumela kakuhle umzimba wakhe ongenasono. (Heb. 7:26) Kusasetyenziswa isonka esinjalo nanamhlanje eSikhumbuzweni.
8. Imela ntoni indebe yewayini esetyenziswa eSikhumbuzweni?
8 Iwayini eyasetyenziswa nguYesu ngoNisan 14, 33 C.E., nendebe yewayini esetyenziswa eSikhumbuzweni namhlanje, zimela igazi lakhe. EGolgotha, eyayingaphandle kweYerusalem, igazi lakhe laphalala “ukuze kuxolelwe izono.” (Mat. 26:28; 27:33) Ekubeni isonka newayini yeSikhumbuzo zimela idini likaYesu elixabisekileyo elanikelwa ngenxa yabantu abathobelayo ibe nathi silixabisa, kungakuhle ngamnye wethu azilungiselele ukubakho kwiSidlo Sangokuhlwa SeNkosi unyaka nonyaka.
EZINYE IINDLELA ZOKUZILUNGISELELA
9. (a) Kutheni kubalulekile ukuhambisana nofundo lweBhayibhile lweSikhumbuzo? (b) Uvakalelwa njani ngentlawulelo?
9 Xa sihambisana nofundo lweBhayibhile lweSikhumbuzo olukwincwadana ethi Ukuhlolisisa IZibhalo Imihla Ngemihla, sinokucamngca ngoko kwenziwa nguYesu kanye ngaphambi kokuba afe. Loo nto inokunceda iintliziyo zethu zilungele iSidlo Sangokuhlwa SeNkosi. Omnye udade wathi: “Sihlala sikhangele phambili eSikhumbuzweni. Siba sesikhethekileyo nyaka ngamnye. Ndikhumbula ndimi kwikhaya labangcwabi . . . ndijonge utata wam endandimthanda ndaza ndaziva ndiyixabisa nyhani intlawulelo. . . . Ndandizazi zonke izibhalo nendlela yokuzicacisa! Kodwa kuxa ndandijongene naloo ntlungu yokufelwa apho intliziyo yam yathi yaxhumaxhuma luvuyo ngenxa yento esiza kuyenzelwa yintlawulelo.” Xa silungiselela iSikhumbuzo, kungakuhle sicinge ngendlela idini likaYesu elisikhulula ngayo kwisono nokufa.
Sebenzisa izixhobo ezifumanekayo ukuze wenze intliziyo yakho ilungele iSikhumbuzo (Funda isiqendu 9)
10. Yiyiphi eny’ indlela esinokusilungiselela ngayo iSikhumbuzo?
10 ISikhumbuzo sinokusilungiselela nangokuceba ukwandisa ixesha lethu entsimini, mhlawumbi sibe ngoovulindlela abangabancedani kwiinyanga zeSikhumbuzo. Ukumemela abantu esibafundisa iBhayibhile nabanye kwiSidlo Sangokuhlwa SeNkosi, kuya kusenza sivuye kuba sithetha ngoThixo, ngoNyana wakhe, nangeentsikelelo eziya kufunyanwa ngabo bamkholisayo uYehova nabamdumisayo.—INdu. 148:12, 13.
11. Amanye amaKristu aseKorinte ayidelela njani imifuziselo yeSikhumbuzo?
11 Njengoko ulungiselela iSidlo Sangokuhlwa SeNkosi, khawucinge ngoko kwathethwa ngumpostile uPawulos kumaKristu aseKorinte. (Funda eyoku-1 kwabaseKorinte 11:27-34.) UPawulos wathi nabani na othabatha isonka aze asele newayini ngokungafanelekanga ‘unetyala ngokuphathelele umzimba negazi leNkosi,’ uYesu Kristu. Ngoko umthanjiswa ufanele ‘azicikide’ kuqala ngaphambi kokuba athabathe kwimifuziselo. Kungenjalo, “uzityela yaye uziselela umgwebo ngokunxamnye naye.” Ngenxa yehambo engafanelekanga, amaKristu amaninzi aseKorinte ‘ayebuthathaka yaye eyimilwelwe, eliqela nalele ekufeni’ ngokomoya. Kumele ukuba, amanye ayezingxala ngokutya aze asele kakhulu ngaphambi okanye ngexesha leSikhumbuzo, kangangokude angabi sezingqondweni okanye ozele. Ukuyidelela ngolo hlobo imifuziselo kwenza uThixo akakholiswa ngawo.
12. (a) UPawulos wasithelekisa nantoni iSikhumbuzo, ibe wabalumkisa wathini abathabathayo? (b) Ufanele enze ntoni umntu othabathayo owenze isono esinzulu?
12 UPawulos wathelekisa iSikhumbuzo nesidlo esityiwa nabanye abantu, ibe walumkisa abathabathayo esithi: “Aninakusela indebe kaYehova nendebe yeedemon; aninakuba nenxaxheba ‘etafileni kaYehova’ nasetafileni yeedemon.” (1 Kor. 10:16-21) Ukuba umntu othabathayo kwimifuziselo yeSidlo Sangokuhlwa SeNkosi wenze isono esinzulu, ufanele acele uncedo kubadala. (Funda uYakobi 5:14-16.) Ukuba loo mthanjiswa uye ‘wavelisa iziqhamo ezifanele inguquko,’ akalideleli idini likaYesu xa ethabatha kwimifuziselo yeSikhumbuzo.—Luka 3:8.
13. Kutheni le nto kuya kuba luncedo ukuthandaza ngethemba esilinikwe nguThixo?
13 Njengoko silungiselela iSikhumbuzo, kuya kusinceda ukuthandaza nokucamngca ngethemba esilinikwe nguThixo. Akakho umkhonzi kaYehova ozahluleleyo nongumlandeli othembekileyo woNyana wakhe ofuna ukudelela idini likaYesu ngokuthabatha kwimifuziselo yeSikhumbuzo ngoxa engenabungqina bucacileyo bokuba ungumKristu othanjisiweyo. Ngoko, umntu unokuqonda njani ukuba ufanele athabathe na kwimifuziselo?
NGOOBANI ABAFANELE BATHABATHE?
14. Ngenxa yokuba beyinxalenye yomnqophiso omtsha, yintoni abayenzayo abathanjiswa eSikhumbuzweni?
14 Abo bafanele bathabathe kwimifuziselo yeSikhumbuzo baqinisekile ukuba bayinxalenye yomnqophiso omtsha. Ngokuphathelele iwayini, uYesu wathi: “Le ndebe ithetha umnqophiso omtsha ongegazi lam.” (1 Kor. 11:25) Esebenzisa umprofeti uYeremiya, uThixo waprofeta wathi uza kwenza umnqophiso omtsha owahlukileyo kumnqophiso woMthetho awayewenze namaSirayeli. (Funda uYeremiya 31:31-34.) UThixo uwenze noSirayeli wokomoya lo mnqophiso mtsha. (Gal. 6:15, 16) Kukufa kukaYesu okuwenze wasebenza. (Luka 22:20) UYesu unguMlamleli kulo mnqophiso mtsha, ibe abathanjiswa abanyanisekileyo abakuwo banethemba lokuphila ezulwini.—Heb. 8:6; 9:15.
15. Ngoobani abakumnqophiso woBukumkani, ibe balindelwe liliphi ilungelo ukuba bahlala bethembekile?
15 Abo banelungelo lokuthabatha kwimifuziselo yeSikhumbuzo bayazi ukuba bakumnqophiso woBukumkani. (Funda uLuka 12:32.) Abo baye baba ngabalandeli bakaYesu abathanjisiweyo nabaye banamathela kuye, bebandezeleka kunye naye, babeza kulawula kunye naye. (Fil. 3:10) Ngenxa yokuba bekumnqophiso woBukumkani, abathanjiswa abathembekileyo baza kulawula noKristu ngonaphakade. (ISityhi. 22:5) Abantu abanjalo banelungelo lokuthabatha kwimifuziselo yeSidlo Sangokuhlwa SeNkosi.
16. Khawucacise oko kuthethwa ngamaRoma 8:15-17.
16 Kuphela ngabo bangqinelwa ngumoya ukuba bangabantwana bakaThixo abamele bathabathe kwimifuziselo yeSikhumbuzo. (Funda amaRoma 8:15-17.) Phawula ke ukuba, uPawulos wasebenzisa igama lesiAramiki elithi “Abha,” elithetha ukuthi “Owu Bawo!” Umntwana unokusebenzisa eli gama xa ethetha noyise, kuba ligama elibonisa ukusondelelana njengelithi “tata” nelibonisa imbeko njengelithi “bawo.” Abo baye bafumana “umoya wokwenziwa oonyana” bangabantwana bakaThixo abazelwe ngomoya. Umoya wakhe ungqinelana nomoya wabo, ubenza baqonde ukuba bangoonyana bakaYehova abathanjisiweyo. Ayingomnqweno nje wokuphila ezulwini obenza babe ngabathanjiswa. Baqinisekile ukuba baya kuba ziindlalifa kunye noYesu kuBukumkani bamazulu ukuba bahlala bethembekile de bafe. Kule mihla, kusele nje abambalwa kwabayi-144 000 abalandela emanyathelweni kaKristu, ‘abaye bathanjiswa ngulowo ungcwele,’ uYehova. (1 Yoh. 2:20; ISityhi. 14:1) Ngumoya wakhe obenza badanduluke besithi, “Abha, Bawo!” Basikeleleke nyhani ngokuba nolu lwalamano noThixo!
LIXABISE ITHEMBA LEZIBHALO ONALO
17. Liyintoni ithemba labathanjiswa, yaye balijonga njani?
17 Ukuba ungumKristu othanjisiweyo, ithemba lokuphila ezulwini yeyona nto ibalulekileyo kwimithandazo yakho. Xa iBhayibhile ithetha ‘ngokuthenjiswa ukutshatela’ kuMyeni wasezulwini, uYesu Kristu, uye uzibale nawe kwabo bantu, kwaye ukhangela phambili ekubeni yinxalenye ‘yomtshakazi’ kaKristu. (2 Kor. 11:2; Yoh. 3:27-29; ISityhi. 21:2, 9-14) Xa uThixo kwiLizwi lakhe echaza indlela abathanda ngayo abantwana bakhe bokomoya, uye uthi, “Ndim ke lowo.” Yaye xa iLizwi likaYehova linikela imiyalelo koonyana abathanjisiweyo, umoya oyingcwele ukwenza uthobele uze uthi entliziyweni, “Kuthethwa nam ke apha.” Ngoko umoya kaThixo ungqinelana nowakho kwinto yokuba wena unethemba lokuphila ezulwini.
18. Liyintoni ithemba ‘lezinye izimvu,’ kwaye uvakalelwa njani ngalo?
18 Kwelinye icala, ukuba ungomnye ‘wesihlwele esikhulu’ ‘sezinye izimvu,’ uThixo ukuvave ngethemba lokuphila emhlabeni. (ISityhi. 7:9; Yoh. 10:16) Wena ufuna ukuphila ngonaphakade eParadesi, kwaye kuyakuvuyisa ukucinga ngezinto iBhayibhile ethi ziza kwenzeka kwixesha elizayo apha emhlabeni. Unomdla wokuphila eluxolweni kunye nentsapho yakho namanye amalungisa. Kuwe ingathi alisafiki ixesha apho uluntu lungayi kuswela kutya, lube ngamahlwempu, luxhwaleke, lugule luze lufe. (INdu. 37:10, 11, 29; 67:6; 72:7, 16; Isa. 33:24) Ulangazelela ukwamkela abo baza kuvuswa ekufeni benethemba lokuphila ngonaphakade emhlabeni. (Yoh. 5:28, 29) Ngokwenene uyambulela uYehova ngokukusikelela ngethemba lokuphila emhlabeni! Nangona ungathabathi kwimifuziselo, ubakho kwiSikhumbuzo ngenjongo yokubonisa ukuba uyalixabisa idini lentlawulelo likaYesu Kristu.
NGABA UZA KUBAKHO?
19, 20. (a) Unokwenza njani ukuze ithemba olinikwe nguThixo lifezeke? (b) Kutheni uza kubakho kwiSidlo Sangokuhlwa SeNkosi?
19 Enoba unethemba lokuphila emhlabeni okanye ezulwini, ekuphela kwendlela yokuba lifezeke kukuba nokholo kuYehova uThixo, kuYesu Kristu, nakwintlawulelo. Xa ukho eSikhumbuzweni, uza kufumana ithuba lokucinga ngethemba onalo nangendlela okubaluleke kakhulu ngayo ukufa kukaYesu. Qiniseka ke ukuba uba ngomnye wezigidi zabantu abaza kubakho kwiSidlo Sangokuhlwa SeNkosi emva kokutshona kwelanga ngoLwesihlanu, Aprili 3, 2015, kwiiHolo zoBukumkani nakwezinye iindawo ehlabathini jikelele.
20 Ukubakho eSikhumbuzweni kuya kukwenza ulixabise nangakumbi idini lentlawulelo likaYesu. Ukuphulaphula intetho kunokukwenza ubathande abamelwane bakho uze ubachazele izinto ozifundileyo ngothando lukaYehova nangenjongo yakhe ezukileyo ngoluntu. (Mat. 22:34-40) Khawuzame ngandlela zonke ukuba ubekho kwiSidlo Sangokuhlwa SeNkosi.
^ isiqe. 1 KumaHebhere, usuku lwaluqala ngorhatya luye kuphela ngorhatya olulandelayo.